Hevitra mandalo; resaky ny mpitsimpona akotry: filàna toe-tsaina vaovao | NewsMada
Hevitra mandalo; resaky ny mpitsimpona akotry: filàna toe-tsaina vaovao
Kely foana angamba dia ho azo ambara fa tapitra ho an’ny vahoaka manontolo ny mitaky fiovana. Mety hisy ireo tsy mino intsony ny mety hisehoan’izany fiovana izany, na eo aza anefa, tazana misy mangirana ny momba izany. Tsy hita izay fomba handresen-dahatra izay lany fanantenana, afa-tsy ny fampahatsiahivana fa avy amin’ny fitondran-tena sy ny fihetsiky ny tsirairay no miainga ny fiovana. Ireo izao olona dimy no manoloana ny mponina, samy manolotra fikasana ho fanarenana an’Iarivo. Tsotra ny dinika, misy ve iray amin’ireo fikasana ireo no azo antenaina hitondra fiovana ? Resaka fampanofinofisana sa fikasana mitombina amina tetika tsara rafitra azo iankinana no atolotr’izy ireo na ny iray aminy ? Inona sy inona ny antoka entin’ny tsirairay ahafahana mametraka fitokisana aminy, ary raha mety ho hita taratra, inona no tambiny andrasany na trandrahany ?
Noho ny hasin’ny andraikitra izay apetraka amin’ilay olona ho voafidin’ny maro, manana ny hasiny ny safidin’ny tsirairay ary lasa masina araka izay, ny fanatanterahana azy no adidy tokony hoefaina am-pilamin-tsaina, tsy hisian’ny nenina any aoriana, mety ho ela indray vao hitsiky toy izao ny fahafahana manosika sy misintona ny fiovana hiposaka. Ifanekena noho izany fa ny fihetsikao, ny fihetsiko, ny an’ireo namana sy tapaka maro sy ny fihetsiky ny ankabeazan’ny mpifidy amin’ny alarobia 27 novambra raha afakampitso no antoky ny fiovana eto amin’ny tanàna na anton’ny fitohizan’ny fikorosoana fahana izay efa mampikolay ny mpitazana sady mampahalailay ny vahoaka mizaka ny vokany.
Zava-dehibe ny fahavononana hanefa io adidy noho ny maha mponina sy noho ny fahatsapana ny maha olom-pirenena ny tena, arahabaina ny fananana izany toe-tsaina izany. Tsy hanaovana soa tapany moa iaraha-mahafantatra fa tsy maintsy tsara lanja ny safidy. Inona moa anefa no atao hoe safidy tsara lanja ? Tsy izaho sanatria no hiseho handresy lahatra anao, na ianao no handresy lahatra ahy, fifanankalozan-kevitra no ifanaovana. Lasitra iray no iombonan’ny rehetra izay mikaroka ny marina sy ny rariny, dia fitsinjovana hatrany ny tombontsoa ho an’ny maro sy ny zavatra ikambanana, dia ny tanàna iarahana monina. Avy amin’izay no miainga ny fandinihanao toy ny ahy, ary mbola ny valiny hita taratra ao amin’ny fikasana atolotry ny tsirairay amin’ireo mpilatsaka sy ao amin’ny zava-bitan’izy ireo avy sy ny toetoetrany teo am-panatanterahana izany no ahafantapantarana ny maha-izy azy tsirairay avy. Tsy nanafina ny tenako fa any amin’ny Naina Andriantsitohaina no mirona ny safidiko : tsy noho ny fifandraisako aminy fa noho ny fiheverako fa izy no hitondra fiovana ary hainy ny hanatanteraka ireo fikasana arosony.